Macbadka Luxor waa booqasho lama huraan ah oo ay tahay inaad ogaato | Safarka Absolut
Susana godoy | | Masar
Magaalada qadiimiga ah ee Masar ee Thebes wali waxay ka tagaysaa tusaale wanaagsan oo ah waxay ahayd. Waa run inay durbaba ku jirto qaab burbursan, laakiin midkood uu mudan yahay booqasho. Socodkaan waxaan kula kulmi doonnaa isaga Macbadka Luxor. Mid ka mid ah meelaha ugu caansan taariikhda Masar.
Si aad u badan oo aan weli u ogaan karno sida qayb ka mid ah taariikhda iyo xitaa halyeeyadeeda, wali way ku nasan yihiin meeshan. Maanta waxaan ku booqan doonnaa waxaas oo dhan, waxaan dib u eegi doonnaa oo aan ogaan doonnaa wax kasta oo ay qariso, taas oo aan ahayn faahfaahin kooban. Ma inaan tagno Macbadka Luxor?
1 Aaway Macbadka Luxor
2 Taariikhda Macbadka
3 Qaybaha ugu muhiimsan ee macbadka Luxor
4 Immisa ayey le'eg tahay iridda Macbadka?
5 Goorma ayaa laga helaa booqashada Macbadka Luxor?
Aaway Macbadka Luxor
Waxay kujirtaa magacan si sax ah maxaa yeelay waxay ku taalaa Luxor, oo ah magaalo kacday meeshii Thebes. isagoo sidaas ah, sida xaqiiqda ah horeyba waad u ogayd, inay ahayd caasimaddii hore ee Masar. Webiga Nile waxa ku xiga Luxor, oo ka mid ah meelaha ugu waaweyn, sida aynu nidhaahno. Aag leh dhul cidla ah oo gaara 40º iyo ka badan, xilliga kulaylaha. Magaca goobta waxaa loogu mahadcelinayaa daaraha waaweyn ama macbudyo ku dhex yaal: Midda maanta jirta ayaa ah halyeeyada oo u heellan Amun-Ra iyo tan Karnak. Marka haddii aad rabto inaad aragto Macbadka Luxor waa inaad gasho magaalada maxaa yeelay waa bartamaha dhexdeeda.
Macbudkan waxaa la dhisay xilligii Boqortooyada Cusub. Intaa waxaa dheer, waxay kuxirantahay mid kale oo aan hada soo sheegnay, kaas oo ah kan Karnak. Waxay ahayd nooc ka mid ah waddo ay labada goobood wadaagaan oo ay ka buuxday sphinxes. Marka aagga macbudku wuxuu noqonayaa mid ka sii ballaadhan. Waa mid ka mid ah meelaha lahaa qaybo badan in la ogaado. Sida xaqiiqo muhiim ah, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in ay dhiseen laba fircoon oo iyagu ahaa Amenhotep III oo qaabilsanaa kor u qaadista aagga gudaha. Dhinaca kale, tan labaad ee Fircoonnadu waxay ahaayeen Ramses II oo isagu isku xilqaamay inuu dhammaystiro.
In kasta oo ay iyagu ahaayeen kuwa ugu waaweyn, haddana waa run inay jiraan kuwo kale oo faahfaahin ku soo kordhiyay meeshan, qaab farshaxanno qurxin ah sida kuwii uu dhigay oo kale Tutankhamun iyo xitaa Alexander the Great. Tan iyo xilliyadii Roomaanka waxay noqotay mid ka mid ah xeryaha milateri ee ugu muhiimsan. Waa run in sanadihii la soo dhaafay qaybo muhiim ah la lumiyey, laakiin kuwo kale oo badan ay weli sii jiraan. Waad arki kartaa barxadaha iyo qolladaha, kuwaas oo wali leh faleebo u gaar ah.
Qaybaha ugu muhiimsan ee macbadka Luxor
Dabcan fircoonnadu wax kharash ah ugama harin markay u yimaadeen inay dhisaan macbud loogu talo galay ilaah. Xaaladdan oo kale, waxaa loogu talagalay Ilaaha samada iyo qorraxda. Marka wax waa in loo sameeyaa si waafaqsan. Marka, dhinac, waxaan ka helnaa kuwa caanka ah 'dromos'. Magac u dhigma waddo ama qayb dhexe oo la awoodi karo in laga tallaabiyo. Markii aad soo gaadhay albaabka hore, waxa ku soo dhoweeyey laba qaybood oo waaweyn. In kasta oo ay tahay in la caddeeyo in midkood loo qaaday Plaza de la Concorde ee Paris.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaa na garaacay laba taalo oo dhinac walba fadhiya oo waliba bixiya soo dhaweynta ugu fiican. Tan iyo markii aan dhahno, waxay ku yaalliin albaabka hortiisa waana sawirro Ramses II ah. Markaad gudaha gasho waad bogi kartaa aagga barxadda, iyo sidoo kale barxadda weyn ama atrium. Qaybaha muhiimka ah ee macbudka laftiisa. Arrinta qolalka waxaan ka helaynaa qolka wax lagu bixiyo iyo sidoo kale qolka loogu talagalay Mut oo ahaa Ilaahii samada iyo sidoo kale mid kale, oo loogu talagalay Jonsu oo ahaa Ilaah dayaxa. Adigoon ilaawin qolka dhalmada iyo meelaha barakaysan ee kaladuwan. Ma iloobi karo in sidoo kale qaybta woqooyi, ay leedahay masaajid, sidaas darteedna isku daraya faahfaahinta Masar iyo Islaamka.
Immisa ayey le'eg tahay iridda Macbadka?
Runtu waxay tahay in Luxor uu leeyahay geeso aan dhammaad lahayn si loo ogaado. Marka markaan dooneyno inaan gebi ahaanba sameyno oo aan kaliya u jeedin macbudka, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato hage. Marka laga hadlayo macbudka, sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan dhammaan qaybaha uu haysto iyo dhammaan sheekooyinka mid kasta oo ka mid ah. Ku qiimaha booqashada Macbadka Luxor Waa 7,50 yuuro, taas oo isbeddelka lacagta Masar lagu qiyaaso ilaa 140 EGP. Halka macbudka deriska la ah, Karnak wuxuu leeyahay qiimo dhan 150 EGP oo qiyaastii noqon kara 8 euro (Waxaad haysataa dhawr kilomitir oo fog oo ku xira wadada Sphinxes). Midkani wuxuu kaloo leeyahay matxaf hawada furan, oo aan ku bixin karno 80 EGP, taas oo ah, 4,27 euro. Xusuusnow in saacadaha ay kala duwanaan karaan, sidaa darteed waxaa fiican inaad horay wax u weydiiso.
Goorma ayaa laga helaa booqashada Macbadka Luxor?
Waa run inaan marwalba doorano xilliga xagaaga inaan qabanno safarka noocan ah. Sababtoo ah waa marka aan runtii haysanno ciidaha. Laakiin kiiskan bilaha dayrta. In ka badan wax kasta maxaa yeelay xagaaga heer kulku runtii wuu sarreeyaa, wuxuuna u kacayaa 40º. Ka sokow taas waxaa jira agglomeration badan oo dadka ah. Waa run in helitaanka meeshan ku dhowaad madhan ay tahay hawl aad u adag. Laakiin ka guuritaanka bilaha ugu caansan oo aan doorano kuwa dayrta, waxaan ku socon karnaa xoogaa nasasho ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Macbadka Luxor